Tops Tank Tafika & Camisole
Fitafy fitafy bevohoka
Wholesale Chercewear mpanamboatraOem&Odm
Ny akanjo Wanzhanxing dia ny mpanamboatra tsara tarehy tsara indrindra, mifantoka amin'ny akanjo ambany ambany, Shapewear, Activearewear mahazatra, Akora akanjo sy vokatra materity Productures. Ny vokatra avy amintsika dia ahitana akanjo miloko marevaka, Shapewear Thong, pataloha, pataloha, pataloha bodysuit, fanatanjahantena ara-panatanjahantena ary fanatanjahantena ara-panatanjahantena. Ankoatr'izay, afaka manome odm isika& fanompoana oem.
Wzx Vehivavy SleWear Mamatsy Tummy Control Slimmer Body Slimmer Custom
Ny vehivavy dia manamboatra mpanazatra feno vatana ao amin'ny vatana manoritra ny satroka mofomamy afovoany afovoanyIty Shaper Body Sled ity dia vita amin'ny elastika avo lenta, malefaka, malefaka, malefaka, ary mamelona aina, ny katsoha leotards amin'ny akanjo ambany sy ny STANDEX. Ity bodysuit mahazatra ity dia mety hasiana ny fandehanana mandritra ny andro, mora mametaka ny valahany tonga lafatra sy ny lalan-doha, omeo anao ny làlam-pandeha malefaka kokoa dia mijery tsara amin'ny fitafiana / akanjo ianao, ary ataovy ny vatanao na ny bozaka, mba hanana ombiny tsara tarehy Sary, manintona.
Wzx Vehivavy Compression Tummy Mifehy ny Seamless Bodysuit Bulolesale Sholesale Sharmwear
Ny vehivavy dia manondraka trano fambolena bodysuit slim slim feno voromahery seamewear sexy v sexy leotard mamelatra bodysuitNy vato tsy misy fehikibo ho an'ny vehivavy dia mampiasa craftsmanship manokana dia manamboatra fametahana mafy eo amin'ny faritra afovoany, mamongotra ny valahany& kibony& Miverina, manenjana ny tavoahangy sy ny lamosinao, afaka manafina ny sombin-javatra sy ny andian-tsoratra sy ny andaniny roa mba hikoropaka ny valahanao, hanome anao endrika tsara tarehy. Ity bodysuit seamless ho an'ny vehivavy manana bra dia ny famolavolana V-tend ambany ambany, ny henoko, ny tratranao, ny nononao ary ny tarehinao dia mety ho tsara. Ny tampon-dehilahy tsy misy setroka dia azo tanterahina amin'ny bra ankafizinao, izay manampy amin'ny fampiatoana ny tsipika ny tratrany ary mampiseho ny endrika fiasa akaiky.
WZX MATERTION SHAPER SHANTS MOMBA NY FOTOTRA BELY OEMMM
Ny ShapeWear Mandrakizay Shinoa dia fohy ny setroka ambany amin'ny setrokaIty vohoka miteraka tsy misy fotony ity dia manome tavoahangy malefaka, ary mihemotra, ary opaque tanteraka, manafina ny sombin-kazo sy ny fikosoham-bary ary ny fandehanana an-tsitrapo ary ny fomban-dronono, hazoto amin'ny efitrano ampy mitombo. Ny panton-tsofina malefaka sy malefaka amin'ny hoditra dia tsy hita maso amin'ny fitafiana fiterahana, azo antoka tsara ho an'ny fahasalamana bevohoka. Afaka mitafy izany amin'ny fotoana manan-danja i Mama, ny baby mandro, ny photoshoot, ary ny fitafiana isan'andro.
Wzx Vehivavy Full Slip Fullable Spaghetti Spaghetti Strap StrepWear Manufacturer Oem OMM
Full Slip ho an'ny vehivavy eo ambany fitantaran'ny akanjo Spaghetti slaghettiIty akanjo vita amin'ny akanjo ity dia vita amin'ny maivana dia vita amin'ny fitaovana fofonaina, ny fahatsapana hikasika lamba lamba dia malefaka sy mampionona. Saika tsy ho afaka manohitra ireo vibes-mangatsiaka kely amin'ny akanjo vita amin'ny silamo amin'ny fahavaratra. Ny famolavolana mahafatifaty dia akanjo fahavaratra izay manana sela Spaghetti Spaghetti sy ny fehin-kibo misy sotro izay mety hahatonga ny fampisehoana tonga lafatra amin'ny clavicle, ary ny famolavolana sosona avo roa heny dia manampy ny hatsaran-tarehy ary tsy hahita. Fomba mahazatra: Ny fomba mahitsy dia mety amin'ny tarehimarika maro kokoa, ary ny saron-tsolika amoron-tsiraka fototra dia lavorary mandritra ny fotoana iray.
Serivisy fanamboarana marika
Serivisy famolavolana / fitaovana 7-andry PROWREM / PLUS-habe / fiarovana fiarovana / fiarovana ny logo
Akanjo wanzhanxing co. Ltd. dia orinasa voamarina BSCI. Manome ny mpanjifanay amin'ny SHEMIM SHEAMLE BODYSUIT, BALECLEY CHALEWARY, Activitewear mahazatra, endrika tsara indrindra ho an'ny tavoahangy sy ny valizy sy ny vokatra maharitra, mba hampifangaro ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Izahay dia manome serivisy sy fampifangaroana araka ny fangatahan'ny mpanjifa miaraka amin'ny ekipa serasionaly matihanina.
Ny vokatra vokarina dia ny fandokoana ny fiarovana ny tontolo iainana rehetra.
Afaka manao porofo haingana 7 andro sy fanontana marika manokana izahay.
Mitady mpanamboatra tsara tarehy tsara indrindra ve ianao? Eto isika, azafady andefaso mailaka na whatapp ary misy olona avy amin'ny ekipantsika hiverina aminao ao anatin'ny 12 ora.
Ny orinasa dia manana fanamarinana BSCI. Ny yarn dia manana fanamarinana OEKO-tex.
Ekipa Rd matihanina
Ny ekipa matihanina dia mamorona vokatra sy tsara tarehy tsara tarehy ary tsara indrindra ary manamboatra marika manokana ho an'ny mpanjifa.
Milina seamless amin'ny habeny maro
Atrikasa tsy misy seamlet miaraka amin'ny 12 santimetatra - milina 19 santi-santoni. Afaka mamokatra habe isan-karazany sy miampy vokatra habe izy io.
Ampy fahaiza-manao famokarana sy fanaterana haingana.
Mihoatra ny folo taona niainako tao amin'ny orinasa mpanondrana.
Momba an'i Samoela
Akanjo wanzhanxing co. Ltd.
Akanjo wanzhanxing co. Ltd. dia mpanamboatra scewear matihanina, manarona faritra iray metatra toromarika 13 50000, miaraka amin'ny fahaiza-mamokatra sy ny fanaterana ara-potoana. Nanome OEM izahay&Serivisy ODM amin'ny mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, Etazonia, UK, CA, AU, de ary Kr, ect.
Manantitrantitra ny foto-kevitry ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana ny orinasa rehefa mampiasa ny teknolojia mandroso indrindra hanomezana serivisy ho an'ny marika:
1. Taratasy famolavolana zokiolona natokana, manome endrika bodysuit endrika bodysuit sivana sy porofo haingana 7 andro.
2. Ny atrikasa tsy manam-petra, misy milina 12 santimetatra 12 santim-pisakafoanana avy any Italia.
3. Miaraha miasa amin'ny marika Nilit, a Oko-Tex100 voamarina ny mpamatsy yarn.
4. Ny fandokoana ny tontolo iainana sy ny akanjo tsy misy fotony.
5. Ny fomba amam-panompoana anao dia misy ny logo, fonosana, marika marika, ect.
6. Ny ekipan'ny serivisy mpanjifa matihanina dia manome serivisy mahomby.
Mpanamboatra Partcewear Professional izahay. "Ny fanavaozana, fahombiazana, tsy fivadihana" dia ny serivisy momba ny serivisy sy ny kolontsaina orinasa.
Manantena ny fiaraha-miasa am-pahatsorana aminao izahay.
Natambatra ho anao ny fironana farany amin'ny seamless ambany ambany / wholesale shapeWear bodysuit / Activewear mahazatra.
WZX Dust-Free Moisture-Proofice Warehouse Real Compecear Company Compecear
WZX dia orinasa BSCI iray manam-pahaizana manokana amin'ny fanondranana firenena maro eran'izao tontolo izao mandritra ny 16 taona, dia manana tambajotra varotra manerantany ary mpanjifa marobe izay misy ny mpivarotra, ary ny marika manerana an'izao tontolo izao ao amin'ny kontinanta 7 sy firenena 7.Ny lahatsary dia momba ny asa an-tsoratry ny orinasa isan'andro ao amin'ny orinasa, ny trano fitehirizam-bokatra dia vovoka sy ny hamandoana - porofo. Rehefa mandalo ny fisafoana rehetra ireo entana ireo dia halefa any amin'ity departemanta ity ho an'ny fonosana sy ny fandefasana azy ireo.Mitady mpanamboatra ny endrik'ilay Shethewear, ambanin-javatra, na vokatra matavy ve ianao?Aza mijery intsony. Eo amin'ny toerana mety ianao!
WZX Ironing Fomba miray volo Manufacturing Factory
WZX miray volo Underwear Manufacturer Factory diaTop Shapewear Companies sy Wholesale Shapewear Suppliers.Izany no lahatsary ny Ironing dingana, ny mpiasa sarotra niasa tao amin'ny Ironing atrikasa.Manana santionana tena fototra dingana ho an'ny shapewear, atin'akanjo, activewear, ary ny fiterahana vokatra.Manohana fanompoana toy ny fomba amam-panao fanao santionana famolavolana sy manome marika iray-mijanona fanompoana.Manizingizina amin'ny famokarana vokatra faran'izay tsara mahatonga antsika mahazo fahombiazana. Ary Te-hahazo fahombiazana aminao.
WZX Sample Dign Disction of Custom Programming for Programming ho an'ny milina OEM ODM tsy misy seamless
Rehefa mandray ny volanao ianao, dia hamerina ny famolavolana mba hahitana raha ao anatin'ny fahaizantsika manamboatra izahay. Raha zavatra iray mahaliana antsika izany ary manaiky ny teninay ianao, ny dingana manaraka dia ny dingana santionany. Ny Chef dia hanao famolavolana mahazatra amin'ny solosaina mba hiatrehana ny programa vokatra, avy eo dia hampifandray ny milina miaraka amin'ny fandaharana, ny milina seamless dia hamoaka ny vokatra arakaraka ny fandaharana, ny santionany voalohany dia miakatra.Mpanamboatra Sholese Corfect Shortease, mpamatsy Wholesale Sholesale, mpamokatra WZX Seamless, manome antoka ny kalitao tsara indrindra sy ny vidiny mora indrindra, raha mila fanazavana fanampiny momba ny vokatrao azafady mba mifandraisa aminay!
WZX Fast Vonjeo tsara Package Prodessional Manufacturer
Mpanamboatra matihanina izahay sy ny mpamatsy ao Shina, izay manokana amin'ny fanomezana faran'izay tsara vokatra namboarina.Ny sampan-draharahan'ny fonosana ahitana mihoatra ny 70 mpiasa za-draharaha.Needle ho fanaraha-maso natao alohan'ny fananana rehetra dia boxed mba ho azo antoka fa tsy misy vy vokatra rehetra boxed fananana mba hiantohana ny fiarovana ny entana.Manana vahaolana tonga lafatra amin'ny lafiny rehetra ny fanenomana dingana: mba famokarana, fitaterana ara-nofo, fanenomana ny teknolojia, ary ny milina fihazonana.Amin'ny maha-Wholesale Shapewear Manufacturers, tsy mahafehy, mahazo aina ny akanjo, mandefitra saran'ny ambongadiny.Fotsiny dia aza misalasala ny nanontany!